कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: लोडसेडिङ, घेरावन्दी, सडक आन्दोलन
लोडसेडिङ, घेरावन्दी, सडक आन्दोलन
दिनको १४ घण्टा लोडसेडिङ शुरु भयो । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि लोडसेडिङको तालिका बनाउने एउटा नयाँ काम थप्यो । दिनको कतिघण्टा लोडसेडिङ गर्दासम्म नेपाली जनताले लोडसेडिङ तालिका हेरेर आफ्नो फत्ते गर्ने गर्दछन् या लोडसेडिङ जति गरे पनि नेपाली जनता रमाइरहन्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ । यहाँ सुत्दा बत्ती छैन, उठ्दा पनि छैन, कहिले बत्ती आयो, कहिले बत्ती गयो ? केटाकेटीहरुले चालै नपाउने भयो । केटाकेटीले अब कार्टुन हेर्न नपाएको, कम्प्युटरमा खेल्न नपाएको पनि धेरै भयो । विहान बेलुका आकलझुकल बत्ती आउने बेलामा मात्र टिभि हेर्ने र कम्प्युटरमा खेल्न पाने भएपछि केटाकेटी पनि लोडसेडिङकाृ तापदका खोज्न थालेका छन् । अब त अति भयो भनेर राती उठेर कार्टुन हेर्ने, कम्प्युटरमा गेम खेल्न थालेका छन् । त्यतिमात्र हैन हात हातमा भएका मोबाइलहरु चार्ज गर्न पनि आलम लगाएर सुत्नु पर्ने बाध्यता भइसक्यो । खाना पकाउने बेलामा बत्ती छैन, खाना खाने बेलामा बत्ती छैन । शौचालयमा जाने बेला बत्ती छैन । घामलाग्दा बत्ती छैन, पानी पर्दा बत्ती छैन डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कर्यालयमा, अझ कति घण्टा बढ्ने हो यकिन छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ पनि नेपाली जनताले भोगे । उज्यालो नेपालको लागि, नेपाली जनताको समृद्धिको लागि लडेका नेताहरु प्रधानमन्त्री भएका बेला लोडसेडिङ घटाउन नसक्नु लाजमर्दो भएन र ? कुरा ठुलो गर्ने, सानो काम पनि गर्न नसक्ने यो अलि हजम भएन कि ?
घरमा बत्ती छैन, पानी छैन । बजारमा सस्तो चिज केही छैन, खेतमा सिचाई छैन, देशमा शान्ति छैन । युवाहरुलाई काम छैन । नयाँ नेपाल बन्ने कुनै आशा छैन । नयाँ संविधान छैन । नयाँ निर्वाचन छैन । आखिर छ त, देशमा एउटा प्रधानमन्त्री छ, खाली भाडाहरु पनि चाट्ने उसका मन्त्रीहरु छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका आफन्तहरुको मालामाल छ । नेताका चाकरी गर्ने चाकडीवाजहरुका हालीमुहाली छन् । राजनीति गरी खाने कार्यकर्तालाई सरकारी पद छ, भत्ता छ, कर्याक्रम छ , भाषण छ । सरकारको भत्ता पनि खाने, विपक्षलाई गाली पनि गर्न पाउने मेला छ । नेपाली जनताले चिन्न थाले नयाँ नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर, जनताले बुझ्न थाले नयाँ संविधान किन नब्न्ने भो भनेर, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ । आफ्नो छोरा चोर भए पनि, डाँका भए पनि, लुच्चा ठग, बदमास भए पनि अरुले गाली गरेमा रिस उठ्नु स्वाभाविक होला तर अरुको छोरालाई इमान्दार भए पनि, जेहन्दार भए पनि, असल भए पनि, कर्मथ भए पनि त्यसलार्य कहिले राम्रो नभन्ने नेपाली समाजको परम्परालाई त्याग्न नसक्नेले गाउँ, शहर, राज्य र देशको नेतृत्व समात्दा के ठुलो आशा गर्नु र ?
देशमा विपक्षले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, सरकार पक्षले पनि विपक्षलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रतिस्पर्धा छ । विपक्षले सडक तताएमा सरकार पनि सडक तताउने, विपक्षले जनतालाई जम्मा गरी भाषण गरेमा सरकारले पनि सभा गरेर भाषण गर्ने, विपक्षले सडक जाम गरेमा सरकार पनि सडक जाम गर्ने, विपक्षले जहाँ जे ग¥यो सरकारले पनि त्यही काम भए पछि जनतालाई सरकार र विपक्षमा के फरक भयो र खाली फरक छ त सरकार बसेर खाने र विपक्षमा बसेर कराउने । नयाँ नेपालको बेइज्जत ।